Nzira yekusarudza sei yakachena sanitary pad?
Mukadzi wese akasarudzika mukati make, saizvozvowo nzira yemuviri wake yekuita kumwedzi. Ichi ndicho chimwe chezvikonzero nei akawanda marudzi eapeniki eapeniki achiwanikwa mumusika. Zvaunofarira zvakasarudzika nekuti zvinoenderana nezvinhu zvakaita serudzi rweganda, chimiro chemuviri, uye kuyerera. Maonero ekutanga lev ...
Maitiro Ekusarudza A yekuenda kumwedzi Pad
Waizviziva here: 60% yevakadzi vanopfeka saizi isiriyo? 100% inogona kuchinja izvo. Pane Nguva Dzose, dziviriro yako uye nyaradzo ndizvo zvatinokoshesa. Tinoziva kuti kuva nepadhi yekuenda kumwedzi inokodzera zvinokupa nguva yekuchengetedza yaunoda. Iyo 'saizi imwe inokwana zvese' kufunga hakunyatso kushanda kana choo ...
Sei Sarudza Tissue Pepa?
Wese munhu anoziva kuti munyama bepa ibasa rinoraswa rehutsanana rakagadziriswa nekucheka, kupeta, nezvimwewo, mushure mekugadzirwa kwemuti fiber pepa mbishi. Iwo mafomu echigadzirwa anosanganisira kunyanya matishu, napkins, mapukuta, mapepa emapepa, uye mapepa emapepa. , Inoshandiswa zvakanyanya mumaresitorendi, matafura ekudyira, dzimba nezvimwe pl ...
Matipi matatu Ekusarudza Chimbuzi Pepa
Pazvinhu zvese zvatinotenga pavhiki, pepa remuchimbuzi ndechimwe chezvinhu zvevanhu zvakanyanya uye zvakakosha. Nepo basa repepa rekuchimbuzi richiratidzika kunge rakatwasuka-kumberi uye richishanda, chokwadi chinoramba chiri chekuti bepa ratinosarudza rinochinja hupenyu hwedu uye rine mukana wekushandura o ...
Mucheka wehutsanana, tauro rehutsanana, padanhi rekuchenesa, yekuenda kumwedzi, kana padhi chinhu chinonwiwa chinopfekwa nevakadzi muzvipfeko zvavo zvemukati pavanenge vari kumwedzi, vachibuda ropa mushure mekuzvara, vachipora kubva pakuvhiya gynecologic, kusangana nemimba kana kubvisa nhumbu, kana mune chero mamiriro ezvinhu apo zvakafanira ...